Myanmar Consumers Are into Contactless Payment: Visa Survey | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar Consumers Are into Contactless Payment: Visa Survey
Nearly three in four (72 percent) of Myanmar consumers have expressedaclear interest in adopting contactless card payments, according to the Visa Consumer Payment Attitudes Study.
The study was conducted by ENGINE insights on behalf of Visa in August 2019 across Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, the Philippines, and Myanmar. The total sample size is 5,102 including 515 working adults in Myanmar aged 18-65, withaminimum monthly income cut-off of MMK 150,000.
It also uncovered that over half (52 percent) are now aware of using the contactless card for payments, compared to only 10 percent justayear ago.
“Digital payments have never been more central to economic growth and societal progress. Advances in the movement of money are catalysts for innovation and are vital to open, inclusive, and connected communities,” said Lillian Wang, Country Manager for Visa Myanmar.
Top places where respondents use their contactless cards to make payments are during overseas travel, followed by supermarkets and dining.
Of those who use cashless payment methods, more than three in five (62 percent) expect to increase their usage in the next year. The biggest factors motivating this are convenience (36 percent), wider acceptance of cashless options (28 percent), and the desire to keep less cash on hand (20 percent).
One of the most interesting questions in the Study is how long Myanmar respondents believe it will take for the country to become completely cashless. In this edition of the Study, 42 percent of the people surveyed believed it would take between6to 10 years, 21 percent thought it would take between2to5years, and two percent believed Myanmar could becomeacashless nation within one year.
မြန်မာနိုင်ငံသား သုံးစွဲသူ ၄ ဦး လျှင် ၃ ဦး (၇၂ ရာခိုင်နှုန်း) ခန့်သည် Contactless ကတ်ဖြင့် ငွေပေးချေမှုများ ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ဝင်စားကြောင်း Visa က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် “သုံးစွဲသူများ၏ ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ အလေ့အထများအကြောင်း” လေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရ သိရသည်။
လေ့လာဆန်းစစ်ချက်ကို Visa ကိုယ်စား ENGINE insights မှ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ သြဂုတ်လတွင် စင်္ကာပူ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ လစဉ်ဝင်ငွေ အနည်းဆုံးကျပ် ၁၅၀,၀၀၀ ရရှိသော အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၅ နှစ်ကြားရှိ ဖြေဆိုသူ ၅၁၅ ဦး အပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှရှိ နိုင်ငံ (၇) နိုင်ငံမှ သုံးစွဲသူ စုစုပေါင်း ၅,၁၀၂ ဦးတို့ကို စစ်တမ်းကောက်ယူ ထားခြင်းဖြစ်သည်။
လေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရ ဖြေဆိုသူထက်ဝက်ကျော် (၅၂ ရာခိုင်နှုန်း) ခန့်သည် Contactless ကတ်များဖြင့် ငွေပေးချေမှုကို သိရှိကြကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သောနှစ်ကတော့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိခဲ့သည်။
“ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဟာ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှင့် လူမှုရေးတိုးတက်မှုအတွက် ဘယ်တုန်းကမှ ယခုအချိန်လောက် အဓိက မကျခဲ့ပါဘူး။ ငွေအသွားအလာလှုပ်ရှားမှုတွေ တိုးတက်လာတာဟာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေအတွက် အထောက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေ ပိုမို ချိတ်ဆက်နိုင်မှု၊ အားလုံးပါဝင်မှုနဲ့ လက်ခံမှုတွေဟာ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်” ဟု Visa Myanmar မှ Country Manager ဖြစ်သူ Lillian Wang က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖြေဆိုသူများသည် Contactless ကတ်များကို အများဆုံး အသုံးပြုကြသည့် နေရာများအနေဖြင့် ပြည်ပခရီးသွားရာတွင် အများဆုံးအသုံးပြုကြကြောင်း ဖြေဆိုခဲ့ကြပြီး ထို့နောက်တွင် စူပါမားကက်များ နှင့် စားသောက်ခြင်းများအတွက် စသည်ဖြင့် အသုံးပြုကြကြောင်း ဖြေဆိုခဲ့ကြသည်။
ငွေသားကိုင်တွယ်ပေးချေရန် မလိုသော ငွေပေးချေမှုစနစ်များ (Cashless Payment Methods) ကို အသုံးပြုသူ ၅ ဦးအနက် ၃ ဦး (၆၂ ရာခိုင်နှုန်း) သည် လာမည့်နှစ်တွင် ထိုစနစ်ကို ပိုမိုအသုံးပြုသွားကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်သည်။ ယင်းကို ဖြစ်ပေါ် စေသည့် အကြီးမားဆုံးအချက်များမှာ အသုံးပြုသူများ၏ သုံးစွဲရခြင်း အဆင်ပြေမှု (၃၆ ရာခိုင်နှုန်း)၊ ငွေသားကိုင်တွယ် ပေးချေရန် မလိုသော ရွေးချယ်မှုအပေါ် ကျယ်ပြန့်စွာ လက်ခံမှု (၂၈ ရာခိုင်နှုန်း)၊ ငွေသားကိုယ်တွယ်ပေးချေမှုအပေါ် ဆန္ဒလျော့ကျလာမှု (၂၀ ရာခိုင်နှုန်း) စသည့် လှုံ့ဆော်ချက်များကြောင့် ဖြစ်သည်။
လေ့လာဆန်းစစ်မှုများအနက် စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး မေးခွန်းတစ်ခုမှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ငွေသား လုံးဝ ကိုင်တွယ် ပေးချေရန် မလိုသော ငွေပေးချေမှုစနစ်များ ဖြစ်လာရန် မည်မျှကြာရှည်မည်နည်းဆိုသည့် အကြောင်းအရာအပေါ်ဖြေဆိုသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ယုံကြည်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ယခုအကြိမ် လေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရ ဖြေဆိုသူ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၆ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်အတွင်း၊ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၂ နှစ်မှ ၅ နှစ်အတွင်း၊ ၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၁ နှစ်အတွင်းပင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ငွေသားကိုင်တွယ်ပေးချေရန် မလိုသော ငွေပေးချေမှုစနစ်ကို ကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု အသီးသီး ယုံကြည် ကြကြောင်း ဖြေဆိုခဲ့ကြသည်။
Next articleMyanmar needs to bring in whole ecosystem instead ofafactory: Serge Pun